Alexis Sanchez & Henrikh Mkhitaryan Oo Ku Kala Biiri Doona Man United & Arsenal Kadib Markii Uu Henrikh Mkhitaryan Ogolaaday In Uu Ku Biiro Arsenal & Hal Arin Oo Sabab U Ah – Kooxda.com
Home 2018 January Ingiriiska, Wararka Maanta Alexis Sanchez & Henrikh Mkhitaryan Oo Ku Kala Biiri Doona Man United & Arsenal Kadib Markii Uu Henrikh Mkhitaryan Ogolaaday In Uu Ku Biiro Arsenal & Hal Arin Oo Sabab U Ah
Alexis Sanchez & Henrikh Mkhitaryan Oo Ku Kala Biiri Doona Man United & Arsenal Kadib Markii Uu Henrikh Mkhitaryan Ogolaaday In Uu Ku Biiro Arsenal & Hal Arin Oo Sabab U Ah
January 17, 2018 · by	Abdi Weli Aadan · 0
Henrikh Mkhitaryan ayaa la filayaa in uu ogolaado in uu ku biiro kooxda Arsenal si uu uga mid noqdo heshiiska uu Alexis Sanchez ugu biirayo kooxda Man United inkasta oo uu wakiilkiisu sheegay in uu xiddigu diidi doono in uu ka mid noqdo heshiiska Alexis Sanchez ugu biirayo Old Trafford.
Ku biiristii Mkhitaryan ee Emirates ayaa u muuqda mid dhamaad ku dhaw kadib markii uu xiddigu aqoonsaday in United saxiixa Alexis Sanchez ku garaacday City.
Xiddiga reer Armenia ayaa Old Trafford kula jira heshiis ilaa 2020 ah wakiilkiisa Mino Raiola ayaa sheegay in uu xiddigu ku bixi doono rabitaankiisa ama uu khatar galin doono heshiiska Alexis Sanchez.
Si kasta ha ahaatee waxa la fahamsan yahay in uu Mkhitaryan aqbalay in mustaqbalkiisa Old Trafford uu soo dhamaaday waxana uu doonayaa in uu hoos u dhigo mushaharkiisa 150 kun ee Gini si uu uga tago kooxda.
Arsenal ayaa doonaya in ay 35 milyan ku iibiso Alexis Sanchez waxana uu xiddigu United uga qaadan doonaa mushahar dhan 350 kun oo Gini.
Waxana haatan la filayaa in ay heshiiska Alexis Sanchez iyo Mkhitaryan horay u socdaan kuna kala biiraan labada kooxood maalmaha soo socda.